Gobolka Banaadir oo matalaad ku yeelan doona Aqalka Sare.
By axadle Last updated May 31, 2020
Guddiga Wadajirka ee Diyaarinta Xeerarka Dhamaystirka Sharciga Doorashooyinka Qaranka ayaa maanta soo gabayabeeyay howshooda,iyadoo warbixinta ku saabsan Afarta Xeer ee loo xilsaaray u gudbin doonnaan Guddoonka Labada Aqal ee Baarlamaanka.
Xeerarka ay ka soo shaqeeyeen ayaa waxaa ka mid ah kuraasta Aqalka sare ee la dhigay Gobolka Banaadir, taasoo noqon doonta markii u horeysay oo Gobolka Banaadir matalaad ku yeesho Aqalka Sare.
7 kursi oo lagu dooran doono hab qeybsita 4.5 ayaa la dhigay Gobolka Banaadir, kaasoo oa dheeri ah tirada hadda uu ka kooban yahay Aqalka Sare, waxaana meel marinta kuraastan u baahnaan doontaa wax ka bedel Dastuurka oo laga rabo Baarlamaanka Labada Aqal ku ansixiyo 3 meel labo meel.
Sidoo kale qeybinta 7-da kursi ayaa waxaa go’aan ka gaari doona Hoggaanka sare ee Xukumadda Faderaalka Soomaaliya sida ku cad qorshaha guddigaan.
Si kastaba ha ahaatee Guddiga wadajirka ayaa soo go’aamiyay goobaha la dhigayo kuraasta Baarlamaanka.
Xeerkaan ayaa waxaa go’aamiyay Guddiga Wadajirka ee Diyaarinta Xeerarka Dhamaystirka Sharciga Doorashooyinka Qaranka , waxaana la horgayn doonaan Fadhiga labada golle ee Baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya si ay u ansixiyaan ama u diidaan.
Madaxda Dowlad-goboleedyada oo ku heshiiyay in ay…